» Al-Shabaab oo xaflad Aroos Rasaas ku furay iyo qasaaro nafeed oo ka dhashay
Al-Shabaab oo xaflad Aroos Rasaas ku furay iyo qasaaro nafeed oo ka dhashay
January 3, 2013 - Written by maamule - Edited bymaamule ShareWararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in rasaas xoogan ay ciidamada Shabaab ku gureen goob ay ka socotay Munaasabad xaflad aroos ah.
Xafdaladan arooska ah oo ka soconaysay deegaanka Booco oo qiyaasytii 30KM ujira magaalada Beledweyne ayaa waxaa rasaas ku furay Shabaab.
Wararka ayaa sheegaya in hal ruux uu dhintay sidoo kalana la dhaawacay ilaa 3 kale ay dhaawacmeen kadib markii ay haleeshay rasaasta ay Shabaab tuureen.
Inkastoo aan la ogaarin sababta ka danbaysay rasaastan ay Shabaab arooska ku weerareen ayaa hadana dadka deegaanka waxaa ay sheegeen in ay maqleen rasaas hoos loogu dhigay xili arooska meel wanaagsan uu umarayay
Dadkii ka qeyb galayay xaflada arooska ayaa kala cararay waxaana goobta ay noqotay mid aan la isku waraysan arooskiina uu joogsaday.
Al-Shabaab ayaa horey sidaan oo kale duleedka Ceel-Buur rasaas ula adeegsaday xaflad aroos iyadoona halkaas uu ka dhashay dhimasho iyo dhaawac.
4 Responses to Al-Shabaab oo xaflad Aroos Rasaas ku furay iyo qasaaro nafeed oo ka dhashay
abuu hanaa says:	January 3, 2013 at 14:38	saaxiibayaal anigu wax comont ah ma dhiibanayo laakiin wax ka muhimsan ayaan idiin wadaa, ugu horeyn waxaad dagaal kula jirtaan islaamka, adeeryaal annaaga hanoo maleynina dad aanan waxba ka aqoon saxaafadda, xitaa aasaaska qawaaniinta warbaahin ee gaalada ayaad ku tumateen waxaadna toos ula safateen gaalada, ugu dambeyn waxaan idin leeyahay waxaa ballan Allaah ah in mid mid aan idiin beegsan doono insha’allaah haddaadnaan ka bixin ridonimada aad ku jirtaan.
Reply	Yes says:	January 3, 2013 at 16:11	Mesha waxaa lagu haayay waxyaalaha fisqiga iyo waxa aan ilaah raali ka ahyn
Reply	absame says:	January 3, 2013 at 23:39	Waxay wadaani waa shaqo yuhuuded
Reply	Abdul says:	January 4, 2013 at 06:33	K.k.k.k.k.Aroska hadi ladiday zinada ma labanen rawa